Google wuxuu dhammeeyaa qaabka APK bisha Ogosto si loogu helo AAB | Androidsis
DaniPlay | | Codsiyada Android, Noticias
Sanado badan oo aan nala joognay ka dib, qaabka APK ayaa ka dhammaan doona Play Store-ka bisha Ogosto. Google waxay dhammeysaa nolosheeda ka dib markii waqti caqli gal ah la soo dhaafay oo ay go'aansato inay ku dhawaaqdo AAB (Android App Bundle), qaab cusub oo runtii hubaal aad uga culus marka hore isla markaana soo afjari doona inta badan burcad badeeda
Horumariyaasha doonaya inay shaqada sii wataan waa inay la qabsadaan AAB, tan awgeed wali waxay haystaan ​​qiyaastii laba bilood. Waa wakhti caqli gal ah, gaar ahaan ogaanshaha in soo uruurinta cusubi isbedelayso marka loo eego halbeega imika nala jooga.
1 Faham ka weyn
2 AAB waxay la dagaalantaa burcad badeedka
3 Shaqo yar ayaa looga baahan yahay beddelaad
4 Isbadal lama huraan ah
Faham ka weyn
Dom Elliot, maareeyaha Google Play, gelitaanka rasmiga ah ee blog wuxuu sharxayaa in laga bilaabo bisha Ogosto dirista codsiyada APK aan la aqbali doonin. Tani waxay kugu qasbeysaa inaad isticmaasho AAB, taas oo dhanka kale mashquulin doonta wax aad ugayar APK-yada dabiiciga ah, wax yareynaya xusuusta taleefannada.
Codsiyada Android App Bundle (AAB) wuxuu yareynayaa cabirka 15%, taas oo mustaqbalka fog waxtar u yeelan doonta dadka sida caadiga ah barnaamijyo kala duwan ku rakiba taleefannadooda. Isticmaaluhu wuxuu soo dejinayaa oo keliya waxa lagama maarmaanka ah, isagoo xoogaa khayraad ah aan u cuslaanin sida ay hadda u dhacdo
Qofka ayaa ka faa'iideysan doona, maadaama uu ka faa'iideysan doono processor-ka iyo sawir gacmeedyada uu ku isticmaalo aaladda moobilku, isagoo aan weligood buurnayn buundada. Nooca waa la habeyn doonaa, wax walba illaa iyo inta ay aqoonsaneyso qalabka, sidaa darteed way kaga duwan tahay taleefan yar oo awood yar kan midka awooddiisu sareyso.
AAB waxay la dagaalantaa burcad badeedka
AAB (Android App Bundle) ayaa la dagaalami doona burcad badeedaWay ku adag tahay codsiyada iyo ciyaaruhu inay bilaash noqdaan markay kharash ka helaan horumariyeyaasha. Tan awgeed, feyl ayaa loo isticmaali doonaa qaab xaddidan in kasta oo la soo saaray, haddana ma sahlanaan doonto in wax laga beddelo.
Codsiyada wax laga beddelay lagama aqrin karo taleefan kasta, sidaa darteed xitaa haddii ay tahay aalad la jabsaday laguma taageeri doono taleefannada casriga ah. Algorithms-ku wax badan ayuu ku ciyaari doonaa halkan, taasi waa sababta qaabka AAB wuxuu ku dhuftey Play Store, dhammaan kadib markii la soo saaray 2018.
Horumariyayaashu shaqo ayaa hortaala, gaar ahaan haddii ay doonayaan inay cusboonaysiiyaan oo ay dib u soo dhoofsadaan shaqadooda mar labaad si looga helo dukaanka Google Play. AAB ayaa looga baahan doonaa halkan, laakiin maahan bannaanka dukaanka, sidaas darteed qaabka APK ayaa sii socon doona si loogu arko bogagga qaar.
Shaqo yar ayaa looga baahan yahay beddelaad
Google, iyada oo loo marayo boostada, ayaa leh 'codsiyada badankood, shaqo aad u yar ayaa loo baahan yahay si loo abuuro AAB halkii laga heli lahaa APK. Badanaa waxay ku saabsan tahay xulashada ikhtiyaar ka duwan waqtiga dhismaha ka dibna tijaabiya tan caadiga ah. Xirmada barnaamijka waa qaab furan oo furan oo la jaan qaada qalabka waaweyn ee dhismaha sida Studio-yada 'Android Studio', 'Gradle', 'Bazel' ',' Buck ', Cocos Creator, Midnimo,' Engineal aan dhab ahayn 'iyo matooro kale. The Play Core Native iyo Ciyaar Muhiim ah Java & Kotlin SDKs.
Shirkado badan ayaa horeyba u haystay qayb ka mid ah qalabkooda loo dhoofiyo AAB, oo ay ku jiraan qaar loo yaqaan Adobe, Gameloft, Duolingo, Netflix, redBus, Twitter iyo Riafy. Dhexdooda, qaar kaloo badan ayaa soo muuqan doona inta lagu jiro bisha Luulyo, iyagoo rajeynaya in bisha Ogosto ugu yaraan in ka badan 60% ay la qabsan doonaan.
Mar alla markii aad rabto inaad ka soo degsato fayl ka dukaanka Play Store feylku wuxuu noqonayaa AAB halkii uu ka noqon lahaa APK, markaa ha feejignaan haddii aad bilowdo inaad dib u aragto bisha Ogosto. In kasta oo aanan la haynin taariikh sax ah, waxay noqon doontaa toddobaadyada ugu horreeya bishaas markaan bilaabi doonno inaan aragno qaabkaas.
Isbadal lama huraan ah
Google waxay shaqeyneysay sanado si loogu badalo APK-ka qaabka AABWaxay ka badneyd seddex sano tijaabooyin, tijaabin iyo sixitaan. Waa tallaabo dheeraad ah oo horay loo qaaday xagga horumariyeyaasha, maadaama ay doonayaan inay arkaan shaqadooda oo lagu abaalmariyo, maadaama qaarkood ay lacago badan ku lumiyeen burcad-badeednimada.
Shirkaddu waxay dooneysay inay jabiso wararka maalmo kadib markii kuwii ugu horreeyay ay arkeen shirkado waaweyn, oo ay ku jiraan microblogging shabakadda bulshada ee Twitter, laakiin kaligeed maahan. Qaar kale waxay durbaba ka shaqeynayaan inay awood u yeeshaan inay ka beddelaan qaabka si dhakhso leh loogu helo bil gudaheed.
Tani waxay sidoo kale u oggolaan doontaa shirkadda inay ku shaqeyso qaab bixin kara bood tayo leh oo faa'iido u leh dhinacyada oo dhan, oo ay ku jirto. Google waxay u aragtaa AAB inay tahay ikhtiyaar ku habboon dhammaan horumariyeyaasha, oo ay ku jiraan dad gaar ah oo haysta ugu yaraan hal ama in kabadan barnaamijyadooda oo sudhan.
Qaar ka mid ah codsiyada waa laga tagi karaa, dhammaantood waxay kuxiran yihiin inay cusbooneysiin doonaan iyo in kale, weli waa la arki doonaa sida jawaabta ugu horreysa ee ka imanaya guud ahaan ay tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Google wuxuu dhammeeyaa qaabka APK bisha Ogosto si loogu helo AAB
Beddelka ugu wanaagsan ee loo maro Tinder ee 2021